samādhi – Dhammadīpa
Posted on2Mar 2019 by Ashin Sopāka
Is fit for Mara to address.” – SN 5.2
“Itthibhāvo kiṁ kayirā,
sammā dhammaṁ vipassato.
“Yassa nūna siyā evaṁ,
Itthāhaṁ purisoti vā;
Taṁ māro vattumarahatī”ti.
အကြင်သူအား ငါကား မိန်းမဟူ၍လည်းကောင်း၊ ငါကား ယောကျာ်းဟူ၍လည်းကောင်း၊ ငါကား တခြား တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်၏ဟူ၍လည်းကောင်း (တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်) ဤသို့ ဖြစ်ရာ၏။ ထိုသူကိုသာလျှင် မာရ်နတ်သည် ဆိုခြင်းငှါ ထိုက်၏။”
Ác ma thật cân xứng.”
Posted in Dhamma	| Tagged concentration, dhamma, mindfulness, samādhi, sati